शुभकामना दिनको अवसर, पाe्ग्रा लगेज! -न्यूज-फू लाइ बाओ कम्पनी लिमिटेड
मुबारक दिन, ह्वील्ड लगेज!
सुटकेसमा पा Whe्ग्राहरू? यति सुविधाजनक, ती आजका यात्रीहरूका लागि अतुलनीय आवश्यक हो। तर १ 1970 .० मा, बर्नार्ड साडोले आफ्नो रोलिंग सुटकेस आईडिया बेच्न समस्या भयो।
“मैले यो न्यू योर्क शहरको हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोर र धेरै खरीद अफिसमा देखाएँ, र सबैले म पागल भएको कुरा भने। 'कसैलाई पनि सामानको टुक्रा यसमा पा with्ग्रासमेत तान्न गइरहेको छैन।' मानिसहरूले ती सर्तहरूमा सोचेनन्, "सदोले भन्यो।
85 40 वर्षीय साडो Sad० बर्ष पहिले प्रेरणा पाएका थिए जब उनी प्युर्टो रिकोको एयरपोर्टमा भन्सारबाट जाँदै थिए, अरुबाबाट आफ्नी श्रीमती र बच्चाहरू लिएर फर्किरहेका थिए।
उनले दुई ठूलो, कसले २ly इन्चको सुटकेससहित कुस्ती खेल्दै थिए, कुमाले देखी बिना, जब उसले एक जना मानिसलाई एउटा पा machinery्ग्रा प्लेटफर्ममा मेसिनरीको एउटा टुक्रा सार्दै गरेको देखे।
“उहाँसँग मेसिनरी थियो र ऊ आफूसित धेरै मेहनत नगरी मात्र धकेल्दै थियो र मैले मेरी श्रीमतीलाई भनें, 'हामीलाई चाहिएको कुरा यही नै हो! हामीलाई सामानमा पाels्ग्राहरू चाहिन्छ। ' "
साडो सामानको व्यवसायमा थिए र युएस लगेजको पूर्व राष्ट्रपति र मालिक हुन्, जुन अहिले ब्रिग्स र रिले ट्राभवेयरको हिस्सा हो।
उसले सूटकेसको तल्लोमा ट्रँकमा प्रयोग गरिएको चार कास्टरहरू जोड्यो र एउटा लचिलो पट्टा थप्यो र बजारमा ऊ गयो र सूटकेस पछाडि पछाडि हिडे।
मेसीको सहित डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट हप्तौं अस्वीकृत भएपछि, साडोले मेसीका उपाध्यक्षसँग भेट गरे जो उनको विचारबाट प्रभावित थिए।
मेसीको खरीददार जसले भर्खर उनलाई ढोका देखाएका थिए उनी आफैंको मालिकसँग सहमत भए, र एउटा उत्पादनको जन्म भयो। साडोले १ 1970 .० मा युएस पेटेन्टको लागि आवेदन दिए र १ 1972 1970२ मा उनलाई पहिलो पाटेन्ट व्हील सूटकेसमा प्रदान गरियो। मेसीको पहिलो सुटकेस अक्टोबर १ XNUMX .० मा बेचियो।
साडोले लगभग दुई बर्षसम्म पेटेन्ट राख्यो जबसम्म प्रतिस्पर्धीहरू एकसाथ ब्यान्ड भयो र पेटेन्ट सफलतापूर्वक भ broke्ग गरे, जसले पा up्ग्रा सामानको लागि बजार खुल्यो।
हो, ती पहिलो व्हील सूटकेसहरू राम्रोसँग अनावश्यक थिए। घुम्टो र टिपिंग यात्रुहरूका लागि समस्या थियो जुन स su्केतको तलमा चक्रहरूको साथ ठूलो सूटकेसहरू तान्नका लागि थियो।
यो रोलिंग लग्गेजमा अर्को अग्रिमको लागि करीव २० बर्ष लाग्यो।
एक retractable ह्यान्डलको साथ दुई पाels्ग्रा मा खींचिएको, आजको मानक मुद्दा कालो सुटकेस उत्तर पश्चिम एयरलाइन्स पायलट बब प्लाथ द्वारा 80० दशकको उत्तरार्धमा आविष्कार गरिएको थियो। उसको “रोलाबोर्ड” भनेको लग कम्पनी ट्राभेलप्रोको सुरुवात थियो।
तर पा first्ग्रा पहिले आयो, र पछि लाग्ने लगत्तै मानिसहरूले यात्रा गर्ने तरिका परिवर्तन भयो। के एक सुटकेसमा पाels्हरू राख्नु नै सब भन्दा राम्रो विचार साडो थियो?
"यो ती मध्ये एक हो," उनले हाँस्दै भने।